Boiler etona, etona entona, etona mafana - Goodao Technology Co., Ltd.
Fiainana fanamboarana boiler 50 taona
Fandroana menaka menaka ampiasaina amin'ny lamba, sakafo, goma, taratasy, plastika, kitay, fitaovana fanamboarana sns .. Ny endri-javatra: 1. Ny rafi-pandrefesana anyvera dia mitombina ary tsotra, mora apetraka. 2.Namolavola mampiorina, rafi-pitondrana feno 3. Ny fihodinan'ny rano tsotra, ny firafitra mety amin'ny tsindry, ny fiantohana ny kalitaon'ny rano, azo antoka.
SHX Nivezivezy mikoriana boiler andiany
Fitarihan-kevitra: toy ny karazana haitao matanjaka avo lenta miaraka amin'ny haitao maloto madio maloto. Ny teknôlôjia fandoroana fandriam-pahalemana (CFBC) mivezivezy dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa izay manana toetra miavaka betsaka. 1. Ny fandriana amin'ny alàlan'ny fihanaky ny vatan-drindrina dia ambany noho ny fihenan'ny hafanana, koa ny fandroana oksizenina azota dia ambany be noho ny vinaingitra vita amin'ny arina, ary ny boiler toy izany dia afaka mihalefaka mivantana mandritra ny fizotrana. Boribory fandefasana fandriana miompana amin'ny fluid desulfuriza avo ...
Fampidirana: Ny fitaovam-pitaterana fanatanjahan-tena dia manana anjara toerana lehibe amin'ny indostrian'ny solika, ny angovo, ny fikarohana ara-tsiansa ary ny sehatry ny tafika sns .. Ny vatan'ny vatan-tsindry fanatanjahantena dia ahitana ny cylinder, ny lohan'ny sealing, ny flange, ny tombo-kase, ny poreana ary ny pipa mifandray. Ankoatr'izay, voaaro amin'ny fitaovana fiarovana, metatra ary fiarovana anatiny ihany koa. Ny tsindry Vessel Lehibe fampisehoana parameter lisitry ny tsindry varahina1.0Mpa Inlet Suhu 250 ℃ S ...
Fampidirana: Ny tsindry bokotra tsangam-bokatra Votohetan'ny votoatin'ny vatan-tsolika fanerena1.0Mpa Toeram-pamokarana 250 ℃ Sihena mari-pana 179 ℃ Fangatsiahana rano: mari-pana ao anatiny 90 ℃ ； mari-pana outlet 140 ℃ Ny fiasa tsy miasa feno dia azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny rafitry ny fanodinana niomerika nomerika mifantina fika mpanentana azo ampiasaina. , ny fametrahana singa fanamafisana singa dia azo tanterahina ny fotoana miova ho azy mba hanitarana ny androm-piainana miaraka amin'ny fanodinana mandeha ho azy miaraka amin'ny automatique wa ...
Mpanamboatra bozaka indostrialy matihanina
Xuzhou Double Rings Machinery Co, Ltd dia an'ny Vondron-jaza Golden, orinasa matihanina amin'ny boiler biomass, Boal Boiler, Boiler Gas-menaka, Boiler-menaka mandavantaona, fandriana miforobaka miparitaka, Autoclave, Vessel Pressure, Boiler Electric, Fandroana rano ary Fandroana rano. .
Ny vondrona anay dia manarona faritra 950000 metatra toradroa. Fambolena zavamaniry manodidina ny 50000 metatra toradroa. Manana ny serivisy feno momba ny Fikarohana siantifika, famokarana, fivarotana ary fametrahana. Teknolojia mandroso sy milina fanaraha-maso mba hiantohana ny kalitao tsara indrindra.
HAFA FAMPISORIANA & FIKOMPOANA
Fitaterana boiler sy fonosana
Fandehanana fandehanana vita an-tsoavaly Bo CFB） Fametrahana --- 45Ton 5.3 Mpa mivezivezy mitsangana fandriana azo tanterahina. Rehefa avy nandany ny taona 2016 h hifanakalozana hevitra dia ny boiler 45 T 5.3 Mpa mivezivezy dia misy sonia ilay fifanarahana ary vita ny famokarana. Ankehitriny, ny Circulati ...
Drafitra baomba DZL Chain Grate
1T DZL Chain Grate Steiler boiler vita dia vita rehefa vita ny andro 7 andro dia vita ny fametrahana ny fametrahana ny 1T DZL Chain Grate Steam Boiler ...
Varotra sy ny fandefasana boiler
Fandefasana boiler --- SZL 10Ton Vary vita amin'ny vilia maimaim-poana vita amin'ny rano ny vata famonoana vita amin'ny rano. Ao anatin'ny fifanakalozan-dresaka namana, t ...